Xarkaha Geophone, Geophone Horizontal - XYB
Iyada oo tikniyoolajiyad aad u horumarsan, alaab tayo sare leh, qiimo macquul ah, oo ay weheliyaan macaamiisheenu si ay ula kulmaan mustaqbal ifaya ..
Iyadoo la adeegsanayo "ujeedo-adeegsade, u abuur qiimaha ugu sarreeya isticmaaleyaasha" ujeeddooyinka ganacsiga.
Shirkaddu waxay sii wadi doontaa "saxsanaanta, feejignaanta, adkeynta" qaabka ganacsiga.
240 Hz Geophone Xawaare Sare oo Xad-dhaaf ah 0.75% L ...
240 Hz Geophone Frequency Frequency Sare 0.1% Lo ...
100Hz Xaqiijinta Sare iyo Calaamadaha Xayeysiinta Deggan ee Ge ...
Wada-hawlgalayaasha oo dhan
Wuhan XYB Qalabka Sahaminta Geophysical Co., Ltd.
Shirkaddu waxay u heellan tahay shirkadda R&D, soo saarista iyo iibinta qalabka baarista batroolka, qodista iyo soo saarista qalabka, iyo qalabka sahaminta juqraafiyeed. Waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9000, shahaadada nidaamka maareynta deegaanka, caafimaadka shaqada iyo shahaadada nidaamka maareynta amniga.
Wax soo saarka horseedka geophone sahaminta dhulgariirku wuxuu leeyahay lix taxane, in kabadan 60 nooc.
Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa batroolka, macdanta iyo baaritaanka cilmiga dhulka, wadada, buundada, biyo xireenka iyo dhismaha tunnelka, gariirka makaanikada culus, kormeerka dhul gariirka iwm.
In ka badan 60 nooc ayaa loo fasaxay codsiyada patent-ka qaranka
Oo ay ku jiraan in ka badan 20 shatiyada hal-abuurka, in ka badan 10 nooc oo heer gobol oo ah guulo cilmiyeed iyo farsamo, iyo in ka badan 20 abaalmarinno cilmiyeed iyo tiknoolajiyadeed oo heer qaran, heer gobol iyo degmo ah. Waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9000, shahaadada nidaamka maareynta deegaanka, caafimaadka shaqada iyo shahaadada nidaamka maareynta amniga.
Waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9000, shahaadada nidaamka maareynta deegaanka, caafimaadka shaqada iyo shahaadada nidaamka maareynta amniga.
Suuqa wax soo saarku wuxuu daboolay goobaha waaweyn ee saliida laga soo saaro gudaha iyo dhuxusha, waxaana loo dhoofiyey Yurub, Ameerika, Afrika iyo Koonfur-bari Aasiya iyo in ka badan 50 dal iyo gobol.
Wax soosaarka tayada leh iyo sumcadda wanaagsan waxay ku xiran yihiin soo dhaweyn iyo ammaan weyn.